सुमार्गीले १८ महिनासम्म चरु बिर्सजन गर्ने, खर्च कति लाग्ला ? – समावेशी
सुमार्गीले १८ महिनासम्म चरु बिर्सजन गर्ने, खर्च कति लाग्ला ?
मंगलबार, पौष १०, २०७५ | १४:२२:३६ |
काठमाडौं । यस्तो हत्तपत्त सुनिएको थिएन, १८–१८ महिनासम्म कुनै घरमा निरन्तर होम चल्छ, अन्नलाई धँुवा बनाएर उडाइन्छ । तर, कुनै कुनै विवादास्पद व्यापारी यस्तो पनि गर्दैछन् ।
सम्पत्ति प्राप्तिका निम्ति, ‘आयुर्देही धनं देही विद्यां देही महेश्वरी, समस्तमखिलां देही देही मे परमेश्वरी’ र ग्रह, पीडा, नक्षत्र दोष मुक्त गर्न, ‘नारायणं सर्वकालं क्षुत प्रस्खलनादिषु, ग्रह नक्षत्र पीडाषु देव बाधाषु सर्वतः’ भन्दै नयाँबानेश्वरस्थित हेलो मोबाइलको अफिस रहेको मुक्ति टावर पछाडिको अर्को घरमा अजेयराज सुमार्गीले १८ महिनासम्म चरु बिर्सजन गर्न थालेका हुन् ।
उनले यो घर भुइँचालोको बेलामा किनेसँगै एमाले नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । किनभने, उनले किनेको बडेमाको घरले सोमको साढे दुई तले घरमा पुग्ने घाम–पानी सबै छेकिदियो । अहिले त्यही घरमा सम्पत्ति र सुखशान्तिका लागि १८ महिना निरन्तर धुँवा उडाइरहेका छन् । अनुमान गरौँ– यस्तो काममा खर्च कति लाग्ला ? सामान्य बाहुनले घरको आँगनमा होम गर्दा दिनको कम्तिमा हजार रूपैयाँ लिन्छन् । चरु हाल्न घ्यु, अन्न चाहियो । ब्राह्मणहरूलाई बस्ने, खाने व्यवस्था मिलाउनै प¥यो । दक्षिणा अलग्गै । र, त्यो खर्च एक दिनको हैन, पाँच सय ४० दिनको । त्यसो त सुमार्गीको हजुरबा आफैँमा कहलिएका ज्योतिष–पण्डित थिए । उनले जता–जता हात हालेका छन्, निराशाबाहेक केही पाएका छैनन् ।
रसुवामा उत्पादित मिनरल वाटर हो, सबभन्दा राम्रोसँग चलेको व्यवसाय । तर, त्यो पनि कोरियन लगानीकर्तासँग बलजफ्ती हत्याएका हुन् । हेलो मोबाइल राम्रोसँग चलेको छैन । हेटौंडा एकेडेमी नामक स्कुलचाहिँ ठीकठीकै चलेको छ । चुनढुंगा, दुर्गा कोल्डस्टोरहरूको हालत पनि उस्तै । सिमेण्ट फ्याक्ट्री विदेशी लगानी ल्याउने र लैजाने धन्दामै चौपट भएको छ । माइतिघरस्थित सुमार्गी कम्प्लेक्समा ज्योतिष अफिस पनि राखेका छन् । त्यहाँ डलर पेमेन्टको अनलाइन ज्योतिष सेवा सञ्चालनमा छ, तर त्यति चलेको छैन । विदेशमा बसेका मान्छेले अनलाइनबाटै जन्म मिति, समय र दिशा उल्लेख गरी केही निश्चित कुराहरू हालेपछि चिना निस्कन्छ र भविष्यवाणी गरिन्छ भन्ने प्रचार छ । तर, त्यस्ता ठाउँहरू छ्याप्छ्याप्ती हुँदा सुमार्गीको यो व्यवसाय पनि चौपटमा परेको बताइन्छ ।